Madaxweynaha Koonfurta Mudug Iyo Galgaduud Cabdikariin Guuleed oo laga diiday Degmada Cadaado | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Koonfurta Mudug Iyo Galgaduud Cabdikariin Guuleed oo laga diiday Degmada Cadaado
Madaxweynaha koonfurta Mudug Cabdikariin Guuleed ayaa ka baaqsday safar uu ku tegi lahaa magaaladda Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud taasoo u noqon lahayd safarkii ugu horeeyey ee u ku tago magaalo kamid ah gobolkaas.
Waxgaradka iyo cuqaasha deegaanka Caabuqdwaaq ayaa gebi ahaanba diiday in Madaxweyne Cabdikariin Guuleed lugta soo dhigo magaalada Caabudwaaq balse badalkiisa u ogolaadeen kuxigeenkiisa Maxamed Xaashi oo deegaan ahaan kasoo jeeda deegaanka.
Madaxweyne kuxigeenka Koonfurta Mudug iyo Galagaduud Maxamed Xaashi Carabey oo shalay gaaray magaaladda Caabudwaaq ayaa kulamo la qaatay dadka deegaanka iyo waxgaradka deegaanka.
Sababta loogu diiday Cabdikariin Guuleed magaaladda Caabudwaaq ayaa timid ka dib markii dadka deegaanka iyo Waxgaradka deegaanka ka baqeen oo soo baxday iney keeni karto dagaal taasoo Ururka Ahlusuna Waljameeca ka digay imaanshiyaha Madaxweynaha.
Dhanka kale xiligaan magaaladda Caabudwaaq waxaa ku sugan xubno ka socda Maamulka Gobolada Dhexe ee Ahlusuna Waljameeca iyo xubno kale oo si weyn uga soo horjeeda maamulka koonfurta Mudug iyo Galgaduud ee lagu dhisay Cadaado.
Maamulkan cusub ayaan weli helin isla markaana ku guuleysan in uu taageero ka helo deegaanada ay ka arrimiso Ururka Ahlusuna Waljameeca kaasoo dhawaan lagu soo dhisay magaaladda Cadaado.